डिसहाेमले कावासाेतीका सुदिप र पाेखराकी बिनितालाई एकलाख नगद उपहार दिने - लोकसंवाद
डिसहाेमले कावासाेतीका सुदिप र पाेखराकी बिनितालाई एकलाख नगद उपहार दिने
काठमाडाैँ । डिशहोमकाे नयाँ कार्यक्रम 'डिसहाेममा बिक्रेता दाईको छूट' नामक योजना अन्तरगत २०७६ साल माघ २७ गते देखि फाल्गुन १ गतेसम्म रकम ट्रन्सफर बाट बार्षिक रुपमा रिचार्ज गर्नुहुने ग्राहकहरुलाई समावेश गरेर प्रत्यक्ष लक्की ड्र सम्पन्न गरेको जनाएकाे छ ।
योजना अनुसार फाल्गुन २ गते शुक्रबार साँझ ५ बजे डिशहोमको showcase channel No 100 प्रसारण समेत गरिएको थियो ।
पहिलो प्रत्यक्ष लक्की ड्र बाट बिजय हुनुभएका डिशहोमको सेटअप बक्सको CAS ID No ०२५१९१०७४८४ कावाशोती, नवलपरासीका सुदिप मरासिनी र )@%!(!!)^%), पोखरा कास्कीकी बिनिता गुरुङ्गलाई प्रति व्यक्ति रु. १,००,०००/– नगद उपहार प्रदान गरिने जनाएकाे छ ।
बिजेताहरुलाई डिशहोमको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई दिइएको छ । आउने प्रत्यक्ष लक्की ड्र २०७६ साल फाल्गुन ९ गते शुक्रबार सोहि च्यानलबाट सोहि समयमा प्रसारण गरिने जानकारी गराइएको छ ।
फाल्गुन २ गते शुक्रबार देखि ८ गते बिहिबार सम्म फण्ड ट्रान्सफर त्चबलकाभच बाट बार्षिक रिचार्ज गर्नुहुने ग्राहकहरुलाई ९ गतेकोप्रत्यक्ष लक्की ड्र मा समावेश गरिनेछ । अधिक जानकारीको लागि देशभर रहेको डिशहोमको डिलरहरुमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ ।